Ukuhamba Emhlabeni Wonke - I-AEON Harvest Industry (Hunan) Co., Ltd.
Ukuqaphela i- ukwenziwa kwamazwe omhlaba kwentuthuko yezimakethe futhi amanethiwekhi wesevisi abelokhu ekhona inhloso ebalulekile yenkampani.
Emashumini ambalwa edlule, siphinde sathola imiphumela emangalisayo. Amacala wethu wephrojekthi aphumelele ase-United States, Mexico, Brazil, Chile, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, India, Pakistan, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, INingizimu Afrika, iRussia, amazwe angaphezu kuka-30 nezifunda ezibandakanya i-Ukraine, iSerbia, iJalimane, i-United Kingdom, iSpain ne-Italy.
Sinozakwethu neziteshi zezinsizakalo emazweni amaningi nasezifundeni, kanye neqembu elivuthiwe lokusekelwa kwezobuchwepheshe ekuhlinzekeni ngokuhlanganyela insizakalo yokuthengisa ngemuva kwamakhasimende emhlabeni wonke ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ethengiselwa imakethe yamazwe angaphandle ingahlala isebenza kahle futhi ngaphandle kwezihibe.
Ubunikazi obuningi esinabo njengemikhiqizo yethu nensizakalo eya emhlabeni wonke
Uchwepheshe We-Welding Automation
Eminyakeni engaphezu kwengu-30 yokukhula embonini, siqongelele umuzwa wesipiliyoni sohlelo lokusebenza, noma ngabe yi-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini yokushisela ezenzakalelayo / izikhungo zokusebenza noma ukwakheka nokuhlanganiswa komugqa wokukhiqiza we-welding. Sinikeze izixazululo ezahlukahlukene zokushisela ezizenzakalelayo zokukhiqiza ingcindezi yomkhumbi, ukwenziwa kwemishini yokwakha, ukukhiqizwa kwezimoto, ukukhiqizwa kwe-semiconductor, imishini ye-biomedical, imishini ye-petrochemical, i-aerospace, ukwakhiwa kwemikhumbi nezimboni zamandla enuzi. Ikakhulukazi emkhakheni we-orbital welding, i-robotic welding ne-plasma welding, sisesikhundleni esiphambili emakethe yase-China.
Umhlinzeki We-AS / RS Warehousing System
Uhlelo lwe-AS / RS lokugcinwa kwempahla i-R & D nokukhiqizwa kuholwa kakhulu yiChangsha HUAHENG. Isizinda sokukhiqiza sihlanganisa amamitha-skwele angama-30,000, anabasebenzi abangaphezu kuka-300 kanye nonjiniyela abacishe babe yi-100 R & D. Le nkampani inamalungelo empahla enobuhlakani angama-91 kanti imisebenzi yesoftware engama-35 ihlobene nendawo yokugcina izinto ezihlakaniphile, i-RGV / AGV, i-stacker crane, ulayini wokuhambisa, irobhothi, nesoftware yeWMS. Izinhlelo ze-AS / RS zingenziwa ngezifiso ukuphatha cishe noma yiluphi uhlobo lwento, singanikela nangezakhi zokhiye ezenziwe ngezifiso ezingcono kakhulu kohlelo oluthile kumikhiqizo ethile.
Ikhwalithi, ukusebenza kanye nensizakalo
"Ikhwalithi nokusebenza kuyimfihlo yokuwina izwi lomlomo, futhi insizakalo yangemva kokuthengisa iyona kuphela indlela yokugcina amakhasimende." Enqubweni yokuthuthuka kwebhizinisi, i-AEON Harvest neHUAHENG babelana ngefilosofi nezinhloso ezifanayo. Noma ngabe imishini yokushisela ejwayelekile ejwayelekile noma okokusebenza okwenziwe ngokwezifiso kwe-AS / RS nezinhlelo, imfuneko yokuqala kithi yokuqinisekisa ikhwalithi nokusebenza komkhiqizo. Izimiso esizithobelayo zisenze savela enkampanini encane eyisiqalo saya enkampanini efakwe ohlwini lwamazwe omhlaba.